Madaxa Fulinta Man United Ee Ed Woodward Oo Markale Xarunta Tababarka Kooxdiisa Ka Soo Xaadiray Iyo Xogta Warar Uu Asxaabtiisa Dhaw U Sheegay Oo La Ogaaday. - GOOL24.NET
Madaxa Fulinta Man United Ee Ed Woodward Oo Markale Xarunta Tababarka Kooxdiisa Ka Soo Xaadiray Iyo Xogta Warar Uu Asxaabtiisa Dhaw U Sheegay Oo La Ogaaday.
Gudoomiye ku xigeenka kooxda Manchester United ahna madaxa fulinta ee Ed Woodward ayaa sare u sii qaaday joogitaankiisa xarunta tababarka kooxdiisa kadib dhibaatadii ay Red Devils soo martay kulamadii ugu danbeeyay. Kadib Ed Woodward ayaa xog u bixiyay asxaabtiisa ay isku dhaw yihiin taas oo ay qaar ka mid ah warbaahinta England heleen.
Wargayska The Times ayaa ogaaday in Ed Woodward uu asxaabtiisa dhaw u sheegay sida uu uga helay maskaxda ciyaartoyda kooxdiisa Manchester United ee xaalada ah ku jiraan iyo tababaradii ay qaateen wuxuuna muujiyay in uu aaminsan yahay in Mourinho iyo kooxdiisu ay xaalada badali karaan.
Ed Woodward ayaa waqti badan ku qaadanaya xarunta tababarka kooxdiisa Manchester United kadib markii ay laba guuldaro soo gaadheen saddexdii kulan ee Premier league ugu horeeyay wuxuuna Ed Woodward u muuqdaa mid wali taageero u haya Jose Mourinho si uu waqti uu wax ku badali karo u helo.
Sida warbixintan lagu cadeeyay Ed Woodward ayaa asxaabtiisa dhaw u sheegay: “Ed Woodward waxa uu sii kordhiyay ka soo qayb galkiisa tartamada Manchester United maadaama oo uu soo kordhay walaaca ku saabsan niyadjabkii bilawga xili ciyaareedkan ee kooxda”.
Waxaana qoraalka xogtan la sii raaciyay waxyaabihii uu Woordward kala hadlay asxaabtiisa ay isku dhaw yihiin waxaana qoraalka lagu yidhi: “Waxa uu asxaabtiisa u sheegay in uu ka helay maskax wanaagii tababarka kooxda ee ay kaga jawaabayaan labadii guuldaro ee saddexda kulan iyo in uu ku wareeray wararka sheegayay in isaga iyo tababaraha uu khilaaf ka dhexeeyo”.
Waxa kale oo warbixintan lagu sheegay in Woordward uu maalin kasta la xidhiidho qoyska Glazer Family ee mulkiyada Man United iska leh waxaana qoraalka lagu yidhi: “Woordward waxa uu maalin kasta la hadlaa qoyska Glazer family kuwaas oo United iska leh, wuxuuna kalsooni ku qabaa in kooxdu ay si deg deg ah dhinaca kale u dhigi karo xili ciyaareedkooda isaga oo muhiimada ugu saraysa ka dhigtay halkii uu guulaha dhaqaale siin lahaa’.
Ugu danbayn warbixintan waxaa lagu yidhi: “Woorward waxa uu sidoo kale asxaabtiisa u sheegay in uu gabi ahaanba la yaabay eedaymihii uu Gary Neville isaga u soo jeediyay kadib guuldaradii Brighton”.
Si kastaba ha ahaatee, Woorward ayaa wali kalsoonida siinaya Jose Mourinho taas oo ayna inta badan jamaahiirta Man United ku faraxsanayn maadaama oo ay haddaba quus ka taagan yihiin in macalinka ree Portugal uu kooxdooda badali karo.